अनिशाको साथी पहिलोपटक मिडियामा, आमा रूदै आएपछि गाउँलेहरूको खुलाए यस्तो वास्तविकता! (भिडियोमै हेर्नुस्) – KhabarTime
सुनको मुल्यमा ओरालो लाग्ने क्रम जारी
साईप्रसमा एक नेपाली महिलाको असामयिक निधन
१७ वर्षीया किशोरी बाह्र दिनदेखि सम्पर्कविहीन
बधाई छ नेपाली चेली! एसिड आक्रमणमा परेकि खातुनलाई ‘इन्टरनेशनल विमेन अफ करेज अवार्ड’
कोमल वली बारे नेता रघुजी पन्तको अभिब्यक्ति प्रति काँग्रेस नेतृ लिला नेपालको आयो कडा प्रतिक्रिया (भिडियो)
आजै बिप्लवका नेता सुदर्शन सहित १४४ जना छुु्ट्दै, काे कहाँ बाट छुट्छन् ?
न्युजिल्याण्डमा ७.२ रेक्टरकाे शक्तिशाली भूकम्पपछि सुनामी आउने चेतावनी
कति छन् ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका छुट्न बाँकी कार्यकर्ता ?
कहाँ छन् विप्लव ? यसरी ल्याइदै काठमाडौं !
एजेन्सी । केहि दिन अगाडि घटेकाे घटना हाे अनिशा-कञ्चन काण्ड । घर नजिक भएपनि उनिहरूकाे भेट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै भएकाे थियो । विस्तारै झाँगिदै गएको प्रेमलाइ मूर्त रूप दिन दुवै जना चितवनबाट काठमाण्डाै भागे । काठमाण्डाै भागेपछि उनिहरूकाे पछि दवाव सिर्जना हुन सक्ने आकलन गर्दै कञ्चनले अनिशालाइ सिन्दुर हालिदिए र फोटो पनि फेसबुकमै अपलोड गरे । आएको भोलिपल्टै उनिहरू चितवन फर्के ।
चितवन फर्किसकेपछि अनिशा माइतीमा लागिन भने यता कञ्चन आफ्नो घर । घर त गए तर अनिशाकाे बिछोडमा तड्पिएर जिउन मन नलागेपछि बिष शेवन गरे । मृत्युलाइ नजिकै पुर्याएका कञ्जचनकाे अस्पतालमा अचेत अवस्थामा पुर्याएपछि बाहिरियो अनिशा-कञ्चन काण्ड । यस बीचमा कञ्चन अस्पतालको बेडमा मुर्दा जस्तै ढलिरहे यता अनिशालाइ फेसबुकमा गालीगलाैज बढ्न थाल्यो ।
यतिबेला कञ्चन होसमा त आएका छन् तर पुलिसले पिट्यो र अनिशाकाे बारेमा भन्दा अरू केहि बोल्न सकिरहेका छैनन् । यसै बिच मिडियाहरू कञ्चनकाे गाउमै पुगेर वास्तविकता बुझ्दा गाउँलेहरूले कञ्चन गरिव केटो भएकै कारण छुटाएका हुन् । यदि धनि हुन्थे भने मज्जाले छोरी भित्र्याइदिन्थे भनेका छन् ।
खैर बास्तविकता जे सुकै हाेस्, प्रेममा पागल हुने, जीवनदान दिने मानिसहरू सँसारमा नभएका होइनन्, लैलामज्नुदेखि मुनमदनसम्मका कथाहरू हामीले पढिरहँदा यसैको सेरोफेरोमा रहेका यी घटनाहरू सम्झन मात्रै सक्छाै । वास्तविकता के हाे थाहा नभएपनि गाउँलेका कुराहरू भिडियोमा हेर्नुहाेला ।
नेपालकै शान ‘लहरोस चन्द्र सुर्य झण्डा' सार्वजनिक (भिडियो सहित)